So What ??? – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 20 October 2009 26 October 2009 Categories Excerpts, Reproduction
One thought on “So What ???”
20 October 2009 at 8:52 pm
အင်း. အဲဒီစာအုပ်အနီလေးက နိုင်ငံတကာ လ၀ကတွေမှာ ရစ်ချင်စရာကို ဖြစ်နေလားမသိပါဘူး…… ဒါပေမဲ့ ဆရာ so what လုပ်လိုက်တာ တော်တော်ကောင်းတယ်… အဲလိုမျိုးများများလုပ်ပေးမှပဲ…..
Previous Previous post: Was that Because of Us???
Next Next post: Wow! A Limo!